Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पूँजीबजारको विकास तथा सुधार हुनेमा लगानीकर्ता आशावादी – Emountain TV
पूँजीबजारको विकास तथा सुधार हुनेमा लगानीकर्ता आशावादी
काठमाडाैं, १ माघ । निकै लामो समयदेखि पूँजीबजार पेनिक अवस्थामा रहेकोछ । १८ सयको हाराहारीमा रहेको नेप्से परिसूचक घटेर १२ सय अंकको हाराहारीमा झरेको छ । पूँजीबजारमा प्रविधिले फड्को मारिरहँदा लगानीकर्ताहरु भने झन्झन् घाटामा झरेका छन्।
पूँजीबजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ नेतृत्व पाएपछि भने पूँजीबजारको विकास तथा सुधार हुनेमा लगानीकर्ताहरुले आशा गरेका छन् ।
पुँजी बजारमा बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्ने, कमोडिटी बजार सञ्चालन लगायतका काम पाइपलाइनमा छन् । त्यसैगरी, पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि बजार निर्माताको सुरुवात, एनआरएनलाई लगानी खुला लगायतका मुद्दा पनि चर्चामा छन् ।
यी कार्यहरु पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खुला गर्ने वा नेप्सेको निजीकरण भन्ने मुद्दा पनि छ । यो विषयको निराकरण गर्ने काम पनि गर्नुपर्नेछ ।
यसबाहेक पुँजी बजार सुधारका लागि उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेका ५८ बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । तर पहिलेदेखि नै स्टक मार्केटको विज्ञको रुपमा रहेकाले चुनौतिलाई यसलाई दिगो समाधान गर्न पनि जरुरी रहेको छ ।
पुँजी बजार सुधारका क्रममा यसअघि सारिएका तर पूरा हुन नसकेका विषयलाई निर्क्योलमा पुराउनु नै बजारको आवश्यकता हो । बजारको आवश्यकता अनुसार नयाँ कामहरु पनि प्राथमकितामा राखिनुपर्ने हुन्छ ।
तर बजार मैत्री अध्यक्ष नियुक्त भइसकेकाले अब भने पूँजीबजारले विकासमा फड्को मार्ने आशा लगानीकर्ताको छ ।
नवनियुक्त अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने कार्य धेरै भएपनि चुनौतिलाई छिचोल्दै बजार विकास गर्नूपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको भनाई छ ।
सेयर बजार सुधार्न धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाको ६ बुँदे योजना र बोर्डले ४ सय बढी संस्थालाई नियमन गर्दै आएको र अब कमोडिटि बजार सुरु हुन लागेकोले काममा चुनौती रहेकोछ ।
स्टक डिलर ल्याउने र बीमाले सामुहिक लगानी कोषमा लगानी गर्ने काम समेत बाँकी रहेकोछ । निकै लामो समयदेखि पूँजीबजारमा गिरावट आएर थला परेको पूँजीबजारलाई नवनियुत्त अध्यक्षले कत्तिको निकास देलान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।